Xiisado ka aloosan xaafadda Garsoor ee magaalada Galkacyo. – Radio Daljir
Xiisado ka aloosan xaafadda Garsoor ee magaalada Galkacyo.
Agoosto 27, 2016 12:03 b 0
Galkacyo, Aug 27 2016–Xiisado ayaa ka aloosan Xaafadda Garsoor, gaar ahaana halka loo yaqaano Xurfada oo ay Maleeshiyaad Galmudug ah dhisme ka wadeen, sida ay wararku sheegayaan.
Xiisadaani ayaa waxaa lasheegay inay bilaabatay kadib markii qaar kamid ah dadka kunool xaafadda kunool xaafadda Garsoor ay diideen in dhismaha halkaasi laga wado uu siisocdo, aysana xitaa gorgortan kageli doonin.
Wararkii ugu dambeeyey ee aan kahelayno magaalada Galkacyo ayaa sheegaya in ciidamo maleyshiyaad ah oo kasocda dhanka Galmudug ilaa xalay ay goobtaasi soo gaarayeen, iyadoona dowladda Puntland aysan weli kahadlin.
Madaxweyne Gaas oo kulamo laqaatay mas’uuliyiin Turkiga katirsan.
AKHRI-Gudiga taakulaynta dhaawacyadii Galkacyo oo lagu dhawaaqay.